Mgbe gị na PC mkpọka, na-agbake data gị ga-abụ-ebute ụzọ. Data mgbake si ike mbanye nke ọ bụla na kọmputa na-gburu site ike mbanye mgbake software ma ọ bụ data mgbake ngwaike ngwaọrụ. Ọtụtụ n'ime ndị a ngwaọrụ jikọọ na draịvụ ike na data na-Ewepụtara si ngwaike ngwaọrụ ọzọ n'enweghị nsogbu na juputara. Data mgbake software ga-ada na-agbake data ma ọ bụrụ na data e dochie na data mgbake ngwaike ga-abụ nanị nhọrọ naghachi furu efu data. Jiri ya tụnyere software, ngwaike ngwaọrụ ga-elu ọma ọnụego nke mgbake nakwa ịrụzi mebiri emebi ike draịva. Na ọtụtụ ike mbanye ngwaọrụ nwere data mgbake software gụnyere.
Nkebi nke 1: Ike mbanye mgbake kit na enye
Nkebi nke 2: Ike mbanye mgbake
Ọ bụrụ na ị gbalịrị data mgbake software na bịara na-enweghị N'ihi ya, ike mbanye mgbake kit nile mgbake ngwá dị ka eriri USB, Na-disk na mgbake-egosi banyere Kraịst ga-enyere gị si. Mgbe ị na-ahọrọ nri mgbake kit, kwesịrị ekwesị echiche bụ a gbakwunyere. A viable ọrụ na-eweta ga-ikikere ma ọ bụ ụghalaahịa ka n'ụzọ zuru ezu aka ngwaike mgbake. Ụfọdụ n'ime ndị nkịtị na ọtụtụ họọrọ ike mbanye mgbake ngwá ọrụ na enye:
nzọpụta data http://www.salvationdata.com (+86) 2868107757
Dolphin data ụlọ nyocha http://www.dolphindatalab.com (727) 4490891
Nano forensic http://www.nanoforensic.com +90 2125068183
Nkebi nke 2: Ike mbanye mgbake ọzụzụ
Ike mbanye ọzụzụ na enye na-ndị mmadụ ụlọ ọrụ ndị na-akụziri ndị ọkachamara na nke kacha mma usoro maka nchebe data nlaghachie si a jiri kọmputa ike mbanye. Ụfọdụ ọzụzụ ụlọ ọrụ na-hụrụ na ala mgbe ndị ọzọ na-enye online ọzụzụ klaasị. Na online ọzụzụ ụlọ ọrụ, ahịa na-achọrọ ụfọdụ na ndenye aha ụgwọ maka online web klas site vidiyo ma ọ bụ webinars.
Ma abụọ ụdịdị nke nkwurịta okwu na ụmụ akwụkwọ na-enye ihe ndị bara uru na-enye ha a ndepụta nke kasị atụ aro ngwaọrụ ga-eji zuru data mgbake usoro. Na ihe, ụmụ akwụkwọ ga-amụta otú na-elele ike mbanye nsogbu, ike mbanye mgbake usoro, na nakwa dị ka otú iji mgbake ngwaọrụ. Ndị na-esonụ na-atụ aro ọzụzụ ọrụ maka data mgbake si ike disks:
Ọzụzụ enye ọrụ
My Draịvụ Nwụrụ Anwụ http://www.myharddrivedied.com 678-455-9007
Ozi nche Institute http://www.infosecinstitute.com (866) -471-0059
Dti data mgbake http://www.dtidata.com/training.htm (866) -438-6932
National forensic data mgbake http://www.national-forensic-data-recovery-training-center.net/ + 1-775-323-3282
Cbit ọzụzụ Institute http://www.cbit.com.au 1300-55-33-24
My Draịvụ Nwụrụ Anwụ bụ ọkachamara ike mbanye mgbake ìgwè. Ọ na-enye data mgbake ọrụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ulo, na kwa ike mbanye mgbake ọzụzụ ọrụ maka ọkachamara aka imeziwanye nkà ha. Ndị ọhụrụ data mgbake practitioners, My Draịvụ Nwụrụ Anwụ na-enye certifications. Dabere na chọrọ, ndị na-amụ nwere ike họrọ ka a zụọ na klas ma ọ bụ online ọzụzụ. Maa ị nwekwara ike ịzụta ha ọzụzụ akwụkwọ na-amụta site onwe gị.
Ozi nche Institute na-tumadi melite maka ọzụzụ. Ọ bụghị nanị na ha ga-zụọ ụmụ akwụkwọ maka data mgbake kamakwa i nwere ike ịhụ ndị ọzọ na kọmputa nkà ọzụzụ ebe a. Dị iche iche si akpa ọzụzụ otu, ha na-enye online ọzụzụ, enterprise ọzụzụ nakwa ọchịchị ọzụzụ. Dị ka a Institute, na certifications ga-abụ ihe creditable.
Dti data mgbake dị ka nke a onye mbụ, bụ data mgbake ọrụ na-eweta. Data mgbake software, data mgbake ọrụ, na data mgbake ọzụzụ niile bụ n'ebe ahụ. Ọzụzụ ọrụ ga-ana gị ụfọdụ ego na mkpa ka ị na-edebe klaasị. E nweghị uru klas na ihe niile klas na-eduzi online.
Site aha National forensic data mgbake, ị ga-doro anya na ọzụzụ a ọrụ bụ tumadi maka iwu-eme. Ọ dị mma na-ekwu na-agbake àmà karịa data. N'izo aka nche, niile klas ga-gara na ọzụzụ laabu. Ya mere, ị mkpa aha dị ka a na-amụrụ mbụ. Na ọrụ a bụ nanị dị na United States.
Cbit ọzụzụ Institute bụ a ọzụzụ ọrụ ke Australia. E wezụga ọzụzụ ọrụ, ị pụkwara inwe ha ọkachamara na-enyere gị aka naghachi draịvụ ike gị data ozugbo. Na onye ọ bụla ọzụzụ ọmụmụ, na-azụ ga-edepụtara na ha malite izi. Dị iche iche ọmụmụ ga nwere dị iche iche ụgwọ. Forensic ike mbanye ọmụmụ na-gụnyere na ọzụzụ.
> Resource> Draịvụ> All Draịvụ Iweghachite Ngwaọrụ mkpa ka ị mara